Shiinaha DYT Wareegga Wareegga Heer-kulka N32-384 Soo-saar iyo Warshad | Dianyang
Baaxadda DYT Wareegga Heer-kulka N32-384
Qof kasta, meel kasta, wakhti kasta, hal xabbad oo eber ah, hal daqiiqo gudaheed.
Gargaar looma baahna, qalab looma baahna, dhammaantood waxaa sameeya toogashada. Looma baahna qasaaro badan oo rasaasta ah, waqti, iyo u baahan khibrad.
Hal duudduub-buro hawlgal haga
Hal hawlgal menu-Wareejin-buro ah ayaa xakameeyay baaxadda kuleylka si fudud. Waad ku shaqeyn kartaa qeybta leh galoofyo shidan. Tilmaamaha hawlgalka menu ayaa kaa caawin doona inaad doorato xulashada saxda ah mar kasta, sidaa darteed, isdeji oo toogasho.
Wax soosaarka hal abuurka ah ee 'DYT'
Tilmaamaha hore ee toogashada
Toogashada Ciyaaraha - Ugaarsiga - Cabiraada kuleylka warshadaha - Raadinta iyo Samatabbixinta - Milatariga, Meelmarinta Sharciga iyo Kahortaga Cudurka Fudud ee Caafimaadka iwm.
Hunter's Edge, Toogashada First Auto Zero.
Macaamiisha waxtarka leh waxay dalbadaan:
Waxaan si joogto ah diiradda u saarnaa baahida macaamiisha. Sirdoonkeena Artificial-ka iyo Sawirka Gawaarida Gaarka ah ee loo yaqaan 'Zeroing Auto Zeroing' wuxuu si deg deg ah ugu beddelayaa Qofkasta wax-qabad wax ku ool ah, Meel kasta, Markasta. Tiknoolajiyadayada ugu horreeya ee toogashada waxay xallisaa dhammaan dhibaatooyinka qoryaha.
Waxaan kuu keenaynaa:
teknolojiyad casri ah oo kaa dhigaysa khabiir
U rogo celcelis toogte nin wax kiciya oo wax ku ool ah
Shuruudahaagu waxay u horseedayaan hal-abuurnimadeena wax soo saar xirfadeed oo wax ku ool ah.
Isticmaalaha saaxiibtinimo, ee loogu talagalay bey'adaha ba'an
Guryaha aluminium ee fasalka diyaaraduhu wuxuu isku daraa hawlgal fudud oo leh xoog, xarrago iyo qalafsanaan qaab iswaafajsan oo fudud. Dahaarka adag ee loo yaqaan 'anodised' wuxuu bixiyaa dusha sare oo soo jiidasho leh, xoqan la'aan, kiimiko adkaysi leh oo fudud in la ilaaliyo
Dhammaan qaybaha ka mid ah baaxadda, oo ay ku jiraan batteriga, waxaa loogu talagalay iyada oo la raacayo heerarka IP67, Kalsooni sarreysa iyo awoodda qaabdhismeedka waxay hubisaa in cillad la'aan ay ku hoos jirto xaaladaha deegaanka ee aadka u daran oo u dhexeeya -40 ℃ ilaa + 50 ℃. Naqshadeynta si buuxda biyuhu uga shaqeeyaan ayaa wax ka qabata dhammaan xaaladaha shaqada, xitaa haddii aragtida hubka kuleylka ahi ay biyaha u soo gaadho muddo dheer.
Teknolojiyada casriga ah ee kaa dhigaysa khabiir
Celcelis toogte u rogaa wax-ku-dhaliye wax ku ool ah
Hormarinta shuruudda, waxay keentaa alaabo ku habboon ujeeddo.
Xalka caqliga, tayada muuqaalka weyn iyo isku halayntu waxay horseedaa kalsoonida macaamiisha
iyo soo noqoshada macaamiisha.
Laga soo bilaabo marxaladda fikradda naqshadeynta, nooc kuleylka ah si dhakhso leh ayaa loo soo saaray oo
lagu tijaabiyay xaalado kala duwan oo adag oo deegaanka ah. Xog uruurinta
waxqabadka qaybta aasaasiga ah ee hagaajinta softiweerka ee wadada u xaareysa
ganacsiga wax soo saarka iyo nidaamyada dayactirka.
Sawir Kafiican, Goobood Waxtar Leh
Qiimaha Waxsoosaarka Lagu Xukumay Khibrad Gacmeed Dhamaystiran
Waxba kuma ballanqaadno, in qanacsanaan la damaanad qaado mooyee. Tanaasul la'aan, waxaan dooneynaa khibrad adeegsade wanaagsan. Xirfadle, koox caalami ah oo heegan u ah inay kaa dhigaan go'aan sameeyaha caqliga badan.
Kobcinta faahfaahinta sawirka
Farsamaynta caqliga leh ee looxyada sawirada RAW, caqliga 'qaabka faahfaahsan iyo xoojinta' oo ku saleysan aqoonsiga goobta casriga ah iyo aqoonsiga bartilmaameedka oo hagaagay.
Nambarka nambarka N32-384
Nooca Dareemaha VOx La qaboojin
Xalka Sensor 384 × 288
Dhererka Mowjadaha Jawaabta 8um-14um
Joogtaynta Frame 50Hz
Lens Ujeedada 35mm F1.0
Habka diiradda Diirad saarista Buugga
Xagasha Aragtida 10.6 ° × 8 °
Nooca Muujinta OLED, 0.39 ``, midab leh
Xallinta muuqaalka XGA: 1024 × 768
Baaxadda baaritaanka (Aadanaha, 1.8m) 1000m
Muraayadda indhaha (ikhtiyaar)
Nooca rakibida Isku dheji
Nooca Batariga CR123A nooca Batteryⅹ2
Bixinta Awoodda Dibadda 5V （Nooca-C）
Waqtiga Hawlgalka ee Xidhmada Baytariga H3 saac
Cabirka 156 × 62 × 65 （mm）
Heerkulka Hawlgalka -40 ～ + 50 ℃
Heerkulka Kaydinta -50 ～ + 60 ℃
Badeecad tayo sare leh iyo "saaxiibka nolosha"
Taakulaynta Alaabada Nolosha
Annagu ma nihin kaliya soo saaraha wax soo saarka, laakiin sidoo kale lamaane ganacsi oo daacad ah oo ku raad jooga xiriirka nolosha oo dhan macaamiisheena.
Adoo adeegsanaya naqshad aan laga adkaan karin iyo soosaar caqli badan, tikniyoolajiyadeena asaasiga ah waxay siisaa adeeg wanaagsan.
Hore: nooca-256 infrared camera thermal
Xiga: SR-19 module sawir-qaadaha kuleylka ah